Zimbabwe Authorities Cooperate With Rwandans Seeking Genocide Suspect
Co-Minister of Home Affairs Giles Mutsekwa told VOA that Rwandan agents recently met with their Zimbabwean counterparts in Harare and submitted a formal request for help locating Mpiranya
Zimbabwe's Ministry of Home Affairs has engaged cooperation with Rwandan security services looking for Protais Mpiranya, sought for arrest in connection with the 1994 genocide in the Central African nation.
Co-Minister of Home Affairs Giles Mutsekwa told VOA that Rwandan agents recently met with their Zimbabwean counterparts in Harare and made a formal request for help in the case, to which Zimbabwe has agreed.
Mpiranya, former commander of the Rwandan presidential guard, is said to have spearheaded the genocidal campaign against Tutsis and is wanted by the International Criminal Tribunal for Rwanda in Arusha, Tanzania.
Mutsekwa said Zimbabwe security forces are prepared to assist the Rwandan agents in determining Mpiranya's whereabouts if he is in the country.
“We are ready to assist as long as our Rwandan colleagues provide security agents from their country who will work hand in hand with our police in order to identify and arrest the suspect if he is in Zimbabwe,” he said.
Recent news reports have said Mpiranya is hiding in Zimbabwe where he is alleged to be sheltered by supporters of President Robert Mugabe.